बाली नष्ट गर्न सुरु गर्यो सलह किराले, नियन्त्रण गर्ने विषादी छ कि छैन ? – Jagaran Nepal
» कृषि » छापामा » समाचार
बाली नष्ट गर्न सुरु गर्यो सलह किराले, नियन्त्रण गर्ने विषादी छ कि छैन ?
काठमाडौं । बिहान ७–८ बजे भित्रिएको सलह किरा सुरुमा आकाश र जमिनमा मात्र देखिएको थियो । तर, दिउँसोबाट भने विभिन्न बालीमा छिरेर नष्ट गर्न लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीको नवलपुरमा फलफूलका बिरुवा र मकैमा बसेको थियो । सिमरा र जितपुरमा काउली, फर्सीको पातलगायत तरकारी बालीमा बसेको थियो भने बुटवलमा कागतीको बोटमा बसेको मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले बताए । उनका अनुसार अपराह्न ४ बजेपछि सलह किराले बाली नष्ट सुरु गरेको थियो ।
भारतमा विगतका वर्षहरूमा यो किरा साउनदेखि असोजसम्म झुन्डका रूपमा देखिने गथ्र्यो । तर, यो वर्ष गत वैशाखमा नै देखियो । भारतमा पाकिस्तानबाट सलह आएको थियो । वैशाखमा आएको किराले भारतको मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानलगायतका राज्यमा छोटो समयमै ५० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षति गरेको थियो ।
भारतमा क्षति बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि यसको प्रवेशको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले नेपालमा भारतबाट सलह किरा यो वर्ष आउने सम्भावना न्यून रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कुनै पूर्वतयारी नगरी बसेको थियो ।
तर, शनिबार बिहान एक ठाउँमा करिब १ लाखको संख्यामा रहेको सलह किराको झुन्ड पुष्टि भएको छ । शनिबार बिहान तराई क्षेत्रमा पानी परेकाले राति नै सलह किरा भित्रिएको अनुमान छ । दक्षिणबाट उत्तरतिर बगेको हावाले भारतमा रहेको सलहको ठूलो बथानबाट सानो झुन्ड मात्रै छुट्टिएर नेपाल आएको अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले सलहको सानो झुन्ड देखिएको र आवश्यक सतर्कता अपनाउन आइतबार दिउँसो वैज्ञानिक सम्मिलित बैठक बस्न लागेको बताए । ‘यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिने किसिमको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले गृहकार्य गरी आवश्यक कदम चाल्नेछौँ,’ उनले भने ।
सलह किरालाई नियन्त्रण गर्न ‘मालाथियन ९६ पर्सेन्ट’ विषादी सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । तर, यो विषादी नेपालमा छैन । मन्त्रालयका सचिव डा। भारीले यो औषधि हाल मौज्दातमा नरहेको पुष्टि गरे । ‘हामीसँग यो औषधि छैन, किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । जेठ दोस्रो साता नै कमिटी गठन गरेर नियन्त्रणको उपाय खोज्न भनिए पनि नेपालमा यो किरा नै नआउने भनेर प्रतिवेदन दिएकाले सरकारले कुनै पूर्वतयारी गरेको थिएन । जसकारण अहिले यो रोग भित्रिएपछि नियन्त्रणका लागि छर्ने विषादीको अभाव भएको हो ।
त्यस्तै, क्लोरोसाइरिफियस विषादी पनि सलह किरा मार्न प्रयोग हुन्छ । यो औषधि भने नेपालमा उपलब्ध छ । तर, यसले तुलनात्मक रूपमा कम किरा मार्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा। डिल्लीराज शर्माले बताए । ‘क्लोरोसाइरिफियस विषादी पनि पर्याप्त मात्रामा छर्न सकिन्छ, तर ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
फट्यांग्रोजस्तो देखिने सलह किरा कृषि बाली नष्ट गर्दै आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खतर-नाक किरा हो । एक वर्गकिलोमिटरभित्र एउटै समूहमा डेढ लाखदेखि ३–४ करोडसम्मको संख्यामा जम्मा हुने र बालीनाली एकैपटक नष्ट गर्ने गर्छ । अन्य किराहरू बाली विशेषमा लाग्ने र आंशिक नष्ट गर्ने गरे पनि सलह किरा हरियो जुनसुकै बालीमा लाग्ने र सबै नष्ट गर्ने प्रकृतिको भएको मन्त्रालयमातहतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा। डिल्लीराम शर्माले बताए ।
‘यो किरा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खतर-नाकसाबित भएको छ । नेपाल भित्रिनु भनेको निकै खतराको संकेत हो,’ उनले भने, ‘यसलाई नष्ट गर्न शनिबारबाटै काम थाल्नुपर्ने थियो, तर १–२ दिन पर्खेर गल्ती भइरहेको छ ।’ यो किराले छोटो समयमै बाली, पात, डाँठ सबै नष्ट गर्ने उनले बताए । यो किरा सुरुमा सन् २००३ मा अफ्रिकामा देखिएको थियो । त्यसपछि खाडी मुलुक, इरान हुँदै पाकिस्तानबाट भारतमा आएको हो ।
यो किरा एक दिनमा १ सय ५० किलोमिटरसम्म समूह बनाएर जान सक्छ । ३५ हजार मानिसले बिहान र बेलुका खाने कृषिउपज एक दिनमा एउटै समूहमा आएका किराले नष्ट गर्ने सामर्थ्य राख्छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट